Musharixiinta iyo wax-garadka Hop104 oo xabsi guri la galiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Musharixiinta iyo wax-garadka Hop104 oo xabsi guri la galiyay
Qoorqoor, oo billowgii 2020, Madaxtooyada Soomaaliya u boobtay xilka Madaxweynaha Galmudug, ayaa u qalab qaatay dhaca kuraasta baarlamaan ee taalla Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Musharrixiinta kursiga Aqalka hoose ee sumaddiisu tahay Hop104, wax-garad iyo dhallinyaro ka soo jeeda beesha leh kursiga ee Saleebaan Cabdalle, Dir, ayaa tan iyo saaka ku xannnban guri ku yaalla Dhuusamareeb, kadib markii Axmed Qoorqoor, dul-dhoobay ciidan ka tirsan Booliska Galmudug.
Sida qorshuhu ahaa, doorashada kursiga ayaa maanta loo madlanaa, hayeeshee, musharixiintii rasmiga ahaa ayaa saaka laga hor istaagay in ay ka baxaan guryahooda, si kursiga loogu boobo Mahad Cabdalla Cawad oo dhawaan Guddiga Doorashadu ku dhawaaqeen inuu helay 84 cod, kana mid noqday xubnaha baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Sida ay hore sheegeen, wax-garadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha [Saleebaan Cabdalle], Qoorqoor iyo Farmaajo, ayaa iska kaashaday boobka kursiga, waxaana guud ahaan beesha la duudsiyay xuquuqdoodii dastuuriga ahayd, iyadoo Qoorqoor si cad u sheegay inuu HOP104, kula heshiiyay Cawad.
Xubno ka tirsan Musharixiinta iyo wax-garadka beesha kursiga leh, ee Dhuusamareeb ku xayiran oo ay ka mid yihiin, Faaduma Aadan Jeelle, Dr. Maxamed Axmed Cawke iyo Dr. Maxamed Aadan jeelle, oo qadka taleefanka kula xariiray warbaahin maxalli ah, ayaa sheegay in ciidamo la dul-dhigay u diideen in ay bannaanka u baxan isla-markaana aysan qaban karin shir jaraa’id.
“Meeshaan odayaashii oo dhan iyo musharixiintii ayaa ku jira, shacabkii ayaa jooga, saaka Boolis ayaa noo yimid, waxa ay amar nagu siiyeen in aanan shir jaraa’id qaban karin oo aanan bannaanka u bixi karin”. Ayuu yiri mid ka mid ah musharixiinta xanniban.
Musharixiintu, waxa ay guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda ugu baaqeen in aan la isku halayn Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, oo ay qudhiisa ku eedeeyeen inuu raalli ka yahay boobka kuraasta taalla Galmudug.
Doorashada Aqalka hoose, ayaa ku billaabatay boob iyo jid-gooyo, taas oo sababtay, cabshooyin xooggan oo ay si joogto ah u gudbinayaan beelaha kuraastooda la boobay.
Doorashada ayaa hal sano dib uga dhacday xilligeedii, waxaana lagu sii daray boob iyo bililiqo baahan, taas oo dadka qaar tilmaamayan in labadaas tallaabo horseedi karaan gacan ka hadal iyo rabsahado siyaasadeed,
Xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta, ayaa horraanba ka digay qaabka ay ku billaabatay doorashada, waxaana la filayaa in hannaanka uu garwadeynka ka yahay Maxamed Xuseen Roobe, la kulmo qaadicid gudaha ah.